7 Kheyraadka Naqshadeynta Sawirka si Mashruucaagu uga dhigo Mid Hal abuur Leh | Abuurista khadka tooska ah
Naqshadeynta sawirku waa farshaxan rasmi ah, waa habab taxane ah oo loo adeegsado deegaanno gebi ahaanba xirfad lehSi kastaba ha noqotee, sida farshaxanka oo dhan, hal-abuurnimadu waxay muhiim u tahay dhammaan noocyada shaqada, maadaama lagu sharxi doono shakhsiyadda naqshadeeyaha garaafka, iyo sidoo kale waayo-aragnimada uu ku leeyahay aag gaar ah.
Macnaha guud, waqtiga iyo lacagta ayaa si weyn u saameyn kara hal abuurnimo naqshadeeyeWaxay u noqon doontaa arrin shakhsi ahaaneed xirfadle kasta oo sawir leh. Kiiskan, waxaan kuu soo qaadaneynaa liiska ilaha ugu waxtarka badan inaad ka dhigto mashruucaaga mid hal abuur leh sida ugu macquulsan, sababtan awgeed si aad awood ugu yeelato inaad wajahdo daqiiqadahaas ay hal-abuurnimadu noqoto tan ugu fog fikradaheena oo dhan.
1 Kheyraadka ay tahay inaad markasta gacanta ku hayso
1.1 Calaamadda ku dhig bakeerigaaga
1.3 Shaabad caag ah
1.4 Astaanta dhalada
1.5 Astaanta sabuuradda
1.6 Usanza Khatimidii
Kheyraadka ay tahay inaad markasta gacanta ku hayso
Calaamadda ku dhig bakeerigaaga
Fikradda hal-abuurnimadu waa in wax cusub laga sameeyo waxyaabaha caadiga ah ama ugu yaraan illaa xad, tani waa ta ka dhigaysa qofka hal-abuur.
Sababtaas awgeed, ku dar taada astaan ​​ku taal weel Waxay noqon kartaa qaab aad u fiican isla mar ahaantaana, khayraad fudud oo fudud, oo noo oggolaanaya inaan ku soo galno qaab aad u xeeladeysan oo ku saabsan wax kasta oo khuseeya shaqada iyo soo bandhigida astaanteena sida xirfadlayaal muuqaal ah.
Loogu shaqeeyay ugu horreyn si loo siiyo macmiilka jees jees natiijada ugu dambeysa ee shaqadooda kahor intaysan dhammaan. Fikraddu waxay ka kooban tahay xisaabi dhammaan waxyaabaha aan u isticmaali doonno shaqadan, Ka dhigida go'aanka macmiilka wax aamin ah oo la taaban karo marka la fulinayo shaqada la sheegay.
Shaabad caag ah
Waa mid ka mid ah ilaha xirfadeed ee ugu badan ee aad ugu adeegsan karto shaqadooda, iyaga oo siinaya suurtagalnimada hel xiriir aad u qurux badan oo ganacsi leh dhammaan macaamiisha.
Shaambada cinjirka waa shaambadda aan sida caadiga ah ku aragno dukumiintiyo badan oo sharci ah. Calaamadeena ku dhajisan shaabad caag ah waxay noqon laheyd wax, kaliya qiyaasaya, na siin doonta koror xirfadeed oo quruxsan.
Kheyraadkan waxaad ku siin kartaa astaantaada taabasho ganacsi, mahadsanid xaqiiqda ah in qaabkani uu siinayo aragti ah inuu la shaqeeyo nooc caan ah.
Kuwo badan ayaa noqon kara bogagga aan ku qaban karno astaanteenna. Tan waxaa loo samayn karaa ujeedada u soo bandhigo sumadeena habka ugu khiyaanada badan suurtogal ka ah shaqooyinkayaga, kordhinta suurtagalnimada in la galo waxqabadka shaqooyinka iyada oo la soo celcelinayo, maaddaama xeeladaha noocan ahi ay u dhigmaan suurtagalnimada in la galo doorbidyada macaamiisheena.
Waxaa laga yaabaa in farsamadani ay tahay tan ugu habboon ee ku habboon duruufaha aasaasiga ah ee tacliinta.
Si kastaba ha noqotee, waxay ku xirnaan doontaa doorbidida naqshadeeye, iyo sidoo kale dalabaadka isku macnaha ah, oo ay tahay in lagu xisaabtamo dhammaan tixraacyada uu naqshadeeyuhu heli karo si loo sharraxo shaqadooda. Sikasta oo ay tahay dacwada, astaanta sabuuradda ayaa noqon karta hab aad u wanaagsan oo astaantaada lagu dhejiyo goob.
Kuwa naqshadeeyayaasha jecel inay ku daraan taabasho dhowrsan shaqadooda, iyagoo adeegsanaya astaanta caadada Waxay noqon kartaa mid ka mid ah xulashooyinka ugu xiisaha badan dhammaan shaqooyinkaaga.
In kasta oo aan loo baahnayn, habka aan shaqsi ahaan u gaar u yeelano astaanteenu wuxuu si guud u qeexi doonaa aragtida ah in macmiilku kaa qaadan karo, macnahaas marka la eego, waxaa muhiim ah in la ogaado sida loo xusho ilaha aan doorbidno marka la sameynayo aragti ku saabsan macmiil.
Kuwani waa qaar ka mid ah kheyraadka aad u isticmaali kartid si aad naqshadeyntaadu uga shaqeyso wax badan hal abuur iyo hal abuur leh, dhinacyada aasaasiga ah maanta ee qaybta aqoonta oo ay ka buuxaan xirfadleyaal fara badan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » logos » 7 kheyraad naqshadeynta garaafka ah si mashruucaaga looga dhigo mid hal abuur leh